Ungachinja sei makavha emabhuku ako muBooks | Ndinobva mac
Pane dzimwe nguva apo mabutiro ee-mabhuku tinawo angangoita bland. Zvakare, zvirokwazvo pane mamwe acho ayo, kunyangwe ari iwo epamutemo edhisheni yawakaburitsa, haatendise iwe zvachose. Kana iwe ukashandisa maBooks pane yako Mac, Wanga uchiziva here kuti aya mabutiro anogona kuchinjwa?
Iwe unogona kubvumirana zvakanyanya kana zvishoma nevakagadziri vevhavha vanoshanda nevaparidzi. Nekudaro, kana paine chimwe chinhu Iwo mavhezheni edhijitari emabhuku aya ndeekuti iwo anenge akatonyanya kuchinja Ko kana isu tiri kutaura nezve ayo mapepa edhisheni. Nekutsvagisa kwemifananidzo yeGoogle, semuenzaniso, tinogona kuwana dzimwe nzira dzinoverengeka kumabutiro edu. Asi ngatione kuti zviri nyore sei kuita shanduko idzi ku App zveMac iBooks, sekutsanangurwa kwedu kwatiri iDownloadblog.
Chinhu chekutanga isu tinofanirwa kuve nebhuku rakadzorwa munharaunda; ndiko kuti, kuita kuti bhuku rinyurwe pakombuta yedu. Rangarira kuti inogona kuchengetwa mugore - rakafanana neiyo Amazon Kindle sevhisi - kuitira kuti usatore nzvimbo pane yedu hard drive. Kana yako kesi iri yechipiri, iwe unofanirwa kungodzvanya pagore icon iyo inoperekedza bhuku uye kurodha pasi.
Nhanho yechipiri kuenda kuBooks tebhu uko tichava nekutarisisa kwemakopi ese atinawo pasi pebhandi redu. Ikoko iwe unogona kuona kuti ndeapi makavha ari iwo asingatendise iwe. Nhanho yechitatu ichave yekuvhara nyowani takagadzirira iyo yatinoda kushandisa kutsiva yaivapo. Sezvatatotaura, iwe unofanirwa kungotarisa paGoogle mifananidzo -Kana kuti iwe unokwanisa kwazvo kugadzira, gadzira wega - uye uve akagadzirira pakombuta yako.
Pakupedzisira, iwe unofanirwa kudzvanya pane rakasarudzwa bhuku; tsvaga iyo nyowani nyowani mukutora pasi uye uikweze pamusoro pebhuku. Meseji ichaonekwa paunofanirwa kusimbisa kuti iwe unoda kuchinja kavha. Uye mushure mekugamuchira shanduko, iyo nyowani nyowani ichaonekwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Ungachinja sei makavha emabhuku ako mumaBooks
Ruzivo rwekufambisa kwevanhu muTaiwan rave kuwanikwa paApple Mepu